October 2, 2020 - Achawlaymyar
မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးက သိက္ခာတရားဖြစ်မယ်ဆိုရင်….
October 2, 2020 by Achawlaymyar
တန်ဖိုး မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးက သိက္ခာတရားဖြစ်မယ်ဆိုရင် ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးက စောင့်ထိန်းမှုပဲ ။ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးက ကိုယ်ကျင့်တရားဖြစ်မယ်ဆိုရင် ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးက ရိုးသားမှုပဲ ။ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးက အေးချမ်းခြင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင် ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးက ရင့်ကျက်ခြင်းပဲ ။ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးက ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်တည်နိုင်ခြင်းဆိုရင် ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးက ဦးစီးဦးဆောင်ပြုနိုင်ခြင်းပဲ ။ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးက သစ္စာစောင့်သိခြင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင် ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးက ပေးထားတဲ့ ကတိကို မဖောက်ဖျက်ခြင်းပဲ ။ သက်တန့်ချို Unicode, တနျဖိုး မိနျးမတဈယောကျရဲ့ တနျဖိုးက သိက်ခာတရားဖွဈမယျဆိုရငျ ယောကျြားတဈယောကျရဲ့ တနျဖိုးက စောငျ့ထိနျးမှုပဲ ။ မိနျးမတဈယောကျရဲ့ တနျဖိုးက ကိုယျကငျြ့တရားဖွဈမယျဆိုရငျ ယောကျြားတဈယောကျရဲ့တနျဖိုးက ရိုးသားမှုပဲ ။ မိနျးမတဈယောကျရဲ့ တနျဖိုးက အေးခမျြးခွငျးဖွဈမယျဆိုရငျ ယောကျြားတဈယောကျရဲ့တနျဖိုးက ရငျ့ကကျြခွငျးပဲ ။ မိနျးမတဈယောကျရဲ့တနျဖိုးက … Read more
ပြိုမတှေေ ဒီလိုအကငျြ့စာရိတ်တမကောငျးတဲ့ ယောကျြားမြိုးတှကေို ရှောငျသငျ့ပါတယျ…..
ပျိုမေတွေ ဒီလိုအကျင့်စာရိတ္တမကောင်းတဲ့ ယောက်ျားမျိုးတွေကို ရှောင်သင့်ပါတယ် ယောကျာ်းကောင်းတစ်ယောက်ဆိုတာ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းရမှာဖြစ်တယ်။ အကျင့်မကောင်းတဲ့ ယောက်ျားကို အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် မရွေးချယ်မိပါစေနဲ့ …။ ယောကျာ်းတစ်ယောက်က အကျင့်မကောင်းရင် စိတ်ဓာတ်ပါ မကောင်းတော့တာပါ။ ဒီအချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီနေတဲ့ ယောက်ျားမျိုးက စိတ်ဓာတ်မကောင်းတဲ့ ယောက်ျားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော် …။ (၁) မိန်းမတိုင်းကို အထင်သေးတတ်တဲ့ ယောက်ျား” အမြဲစကားပြောရင် မိန်းမတိုင်းကို အထင်သေးတဲ့စကားပြောတတ်တဲ့ ယောက်ျားမျိုး၊ သူ့ကသာ အတော်ဆုံး၊ အတတ်နိုင်ဆုံးဆိုပြီး တစ်ဖက်လူကို အထင်သေးတဲ့အကြည့်နဲ့ ကြည့်တတ်တဲ့ ယောက်ျားမျိုးဟာ စိတ်ဓာတ်မကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေထဲမှာ ပါနေပါတယ်။ ယောကျာ်းတွေကောင်းတွေကတော့ အဲ့လိုမျိုး မလုပ်တတ်ကြပါဘူး …။ (၂) မိန်းမလိုမိန်းမရ စကားပြောတတ်တဲ့ ယောက်ျား” မိန်းမတိုင်းက မိန်းမလို မိန်းမရ စကားပြောတတ်တဲ့ ယောက်ျားမျိုးကို ရွံတတ်ကြတယ်။ အဲ့လိုယောက်ျားမျိုးကိုလည်း ဝေးဝေးရှောင်တတ်ကြပါတယ် …။ … Read more
သနျ့ရှငျးမှုအပိုငျးမှာ အားနညျးခဲ့တဲ့ မိနျးကလေးရဲ့ ကွောကျဖကျဖှယျရာ အဖွဈ….
သန့်ရှင်းမှုအပိုင်းမှာ အားနည်းခဲ့တဲ့ မိန်းကလေးရဲ့ ကြောက်ဖက်ဖွယ်ရာ အဖြစ် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဓိက အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တဲ့ မိန်းမအင်္ဂါကို ကောင်းမွန်စွာ ဂရုစိုက်တတ်ဖို့ အရမ်းကို အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးကြောသန့်စင်ပေးခြင်း၊ အဝတ်အစား အတွင်းခံပုံမှန် လဲလှယ်ပေးခြင်းတွေက မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့် အရာတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာက ပြောပြဖို့ မသင့်ဘူးဆိုပေမယ့် တရုတ်နိုင်ငံက အသက်(၂၃)နှစ်အရွယ် Fang Fang လို့ခေါ်တဲ့ မိန်းကလေးရဲ့ အဖြစ်ကတော့ သင်ခန်းစာယူဖို့၊ ဆင်ခြင်ဖို့ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာဖြစ်တာကြောင့် ဖော်ပြပေး လိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်နော် …။ တရုတ်နိုင်ငံမှ Fang Fang လို့ခေါ်တဲ့ မိန်းမပျိုလေးတစ်ဦးဟာ အတွင်းခံဘောင်းဘီကို တစ်လနေမှ တစ်ခါသာ လဲလှယ်ဝတ်ဆင်တတ်သူပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လလောက်မှာတော့ သူမဟာ နေထိုင်မကောင်း ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ စစချင်းမှာတော့ သိပ်ဂရုမစိုက်ဖြစ်ပေမယ့် ၁၀ ရက်လောက်အကြာမှာတော့ … Read more
ဖူးစာရှငျနှငျ့တှပွေီ့ဖွဈကွောငျးကို သိနိုငျသညျ့ အခကျြမြား
အချစ်စစ်ဆိုတာ ရှားပါးတယ်။ တကယ့်အချစ်စစ်ကို တွေ့ပြီဆိုရင်လည်း မျှော်လင့်ချက်တွေ ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက် လာပါတော့တယ်။ အချစ်စစ်က လူတွေကို ပန်းရောင်တိမ်တွေပေါ်မှာ မျော်နေသလို ခံစားရအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပြီး အတွေးပေါင်းများစွာနဲ့ တစ်ညလုံး နိုးကြားနေ စေနိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် မိမိချစ်တဲ့သူနဲ့တွေ့တိုင်းလည်း တစ်ဘဝလုံး ပေါင်းဖက်ရမယ်လို့ ယုံကြည်ထားလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ တစ်ဘဝလုံးစာအတွက် ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုရင် ချစ်တယ်ဆိုတာထက် ပိုတဲ့ပေးဆပ်မှုတွေ နာကျင်မှုတွေကို ခံစားနိုင်ရပါမယ်။ ဒီနေ့ ပြောပြပေးမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ အချစ်စစ်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ အရာတွေအကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ တစ်ယောက်စိတ်ကို တစ်ယောက်က နားလည်လာနိုင်မယ်” လေ့လာမှုတွေအရ အချိန်အကြာကြီး ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ စုံတွဲတွေဟာ တစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်၊ အတွေးတွေကို တစ်ယောက်က နားလည်နိုင်ကြတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဒါဟာ လူတစ်ယောက်ကို သိတယ်ဆိုတာထက် အများကြီးပိုပါတယ်။ … Read more
ဘယ်လောက် လှတဲ့ မိန်းမ ဖြစ်စေ ဘယ်လောက် ရုပ်ဆိုးတဲ့ မိန်းမဖြစ်စေ မွေးခန်းထဲ ရောက်ရင် အတူတူပဲ
ဘယ်လောက် လှတဲ့ မိန်းမ ဖြစ်စေ ဘယ်လောက် ရုပ်ဆိုးတဲ့ မိန်းမဖြစ်စေ မွေးခန်းထဲ ရောက်ရင် အတူတူပဲ ။ လှလှ မလှလှ.. ရုပ်ဆိုးဆိုး မဆိုးဆိုး ချီးမထွက်ရင်… တော်ပြီ။ ကိုယ်ဒွေ အတွက်တော့ ချီးမထွက်တဲ့ မိန်းမ က ချစ်ဖို့ကောင်းတာဗျ။ ခလေး မထွက်ခင်.. ချီး အရင် ထွက်တတ်တာကိုး🤮🤮။ မိန်းမ အများစု (တချို့မပါ )တူညီတဲ့ အချက်က ခလေးကလည်း မထွက်သေး ညှစ်ရတာလည်း အားကုန် မောပန်း ဗိုက်ကလည်း.. ရှယ် နာပြီးရင်း နာ အဲ့ အချိန်မှာ.. ကျိန်ဆဲပြီ ။ ဒင်း လုပ်လို့ ငါ့မှာ ဒုက္ခ တော်တော်ကြီးဒယ်.. ဒင်းကတော့ ဘယ်မယားငယ်ဆီ သွားနေလဲ မသိ … Read more
ကံ ပိတ်ရခြင်း အကြောင်း….
နှိမ့် ကံပိတ် နေသူများအတွက် ကံခေါ်နည်း ကံ ပိတ်ရခြင်း အကြောင်းကတော့ အလွန်နက်နဲပါတယ် လက်ရှိကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူ အနေအထိုင် နေအိမ်အခန်း ထားသိုမူ့ အမှားအယွင်း အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း အမှားအယွင်း ဘုန်းကံနိမ့်စေမူ့ အပြုအမူတွေအပြင် အတိတ်အကုသိုလ်ကံရဲ့ အတားအဆီး အစရှိသဖြင့် ဘက်ပေါင်းစုံကနေ ရှိနေနိူင်ပါတယ်။ အခုပြောမယ့် နည်းကတော့ အဲဒီ အတားအဆီးတွေ ကျော်လွှားပြီး မိမိစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ လုပ်နေသမျှ ကံပိတ်တာတွေ တဖြည်းဖြည်း အားနည်းစေပြီးကောင်းကံတွေ အကျိုးပေးလာစေမှာပါ။ အခုလုပ်ရမယ့် အရာတွေကို ပြောပြပါမယ်။ ၁။ မိမိပြုခဲ့ဖူးသမျှသော ကုသိုလ်တွေထဲက မှတ်မှတ်ရရ ဖြစ်ခဲ့ရပြီး ပီတိဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ကုသိုလ် ၁၁ မျိုးကို စာရွက်နဲ့ ချရေးပြီး ပလပ်စတစ် လောင်းထားပါ။ နံနက်တိုင်း အိပ်ယာထထချင်း အဲဒီစာရွက်ကို အစအဆုံးဖတ်ပြီး ကျေနပ်ပီတိဖြစ်ပါစေ။ အဲဒီစာရွက်ကိုဖတ်ပြီးမှသာ … Read more